Ciyaaraha Gobolada Bari iyo Sanaag & Philip Coutinho oo Barca noqday (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 7, 2018 2:55 b 0
Garoonka weyn ee Bossaso waxaa ka socda tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolada Bari iyo Sanaag. Waxaa la sameeyey isku aadka wareegga siddeed-dhammaadka koobka kaddib markii la soo gabagabeeyey heerka guruubyada. Ciyaartii ugu horaysay waxa ay dhexmartay kooxda ku ciyaaraysay magaca degmada Bossaso iyo kooxda degmada Buraan, waxaana wareega afar-dhammaadka u soo baxay degmada Bossaso.
Dhankaas iyo Premier League-ga, kooxda Liverpool ayaa ugu danbeyn aqbashay dalabkii ka yimid kooxda Barcelona ee ciyaaryahanka Philippe Coutinho. Tababraha kooxda Arsenal, Jurgen Klopp, ayaa yiri, “Coutinho waayahaan oo dhan waan ka fujin weyney dalabkiisa Barcelona, waana uu nagu khasbay in aan wareejino, waana meesha kaliya ee uu ku faraxsanaa, uuna reerkiisa la rabay. Wax kasta waan isku deynay iyo sidii uu ugu waari lahaa Liverpool, laakiin nooma ay suurtoobin.”